स्थानीय तहलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : ७० प्रतिशत बजेट के गर्ने ? ओढ्ने ओच्छयाउने हो र ! - नागरिक रैबार
स्थानीय तहलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : ७० प्रतिशत बजेट के गर्ने ? ओढ्ने ओच्छयाउने हो र !
११ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहलाई कुल बजेटको ७० प्रतिशत बजेट माग गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।
पत्रकार महासंघ कैलाली शाखामा तालाबन्दी